जनता धनी नभएसम्म राज्य बलियो बन्नै सक्दैन : मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता) – Lokpati.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भारत प्रचण्ड राशिफल चितवन सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा नेपाल प्रहरी पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड अमेरिका मृत्यु नेपाली काँग्रेस
जनता धनी नभएसम्म राज्य बलियो बन्नै सक्दैन : मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता)
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Apr 4, 2019
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक पूरा वर्ष भइसकेको छ। सहकारी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
मन्त्रालयले अहिले के कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। के तपाई अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पहिलोपटक हामीले भू–उपयोग नीति ल्याएका छौं। भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा राष्ट्रिय चुनौतिकै रुपमा उभिएको छ। तर, हामीले त्यसको सम्बोधन गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं। सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या निकै बिकराल छन्, ती सबै समस्यालाई कानूनबाटै हल गर्ने हाम्रो प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउँछौं, त्यसले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा हल गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।
पर्याप्त तयारी नगरी सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा केही जटिलता देखिएका छन्, प्रदेशमा सहकारी ऐन बनिसकेको छैन, कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ ?
नियमावली समयमा नआएका कारण पनि केही अप्ठयारो देखिन्छ । कहिलेसम्म आउँला नियमावली ? सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?
सहकारी ऐन २०७४ लगायत अन्य कानूनहरु सहकारीमैत्री नभएको भन्नुहुन्छ, यसको सुधार कहिले र कसरी हुन्छ ?
सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि व्यवस्थित सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्ने विषय यहाँको प्राथमिकतामा छ। यसका लागि के–कस्ता कार्यहरु अगाडि बढिरहेका छन्, संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न ?
मन्त्रालयले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा के–कस्ता कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ?
गरीबी निवारणका क्षेत्रमा गरीब घरपरिवारको पहिचान, आयमूलक व्यवसायिक तालीमहरुको सञ्चालन नै मूख्य कार्यक्रम रहेका छन्। गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हामीले आगामी वर्षदेखि सात वटै प्रदेशमा १/१ वटा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने सोंच बनाएका छौं। सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ठूलो पूँजी खर्च हुने तर प्रतिफल न्यून आउने विगतको बिरासतबाट पाठ सिक्दै हामीले उत्पादनमूखी र प्रतिफलमूखी योजनामा जोड दिन खोजेका छौं।
भूमि व्यवस्थामा देखिएको समस्या र चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्न कस्ता योजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा गरिएका कामहरुबारे मैले माथि नै चर्चा गरिसकेको छु, यसमा दोहोर्‍याइरहन जरुरी छैन। यस अवधिमा व्यवहारिक दृष्टिले समेत हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं। हामीले ५२ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएका छौं, आगामी वर्षदेखि यसलाई सबै कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याउँछौं। भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो। यसले सेवाग्राही बिचौलियाबाट ठगिने, घुस र कमिसनको जालोमा फस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ।
सहकारीले स–साना क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, ठूला कम्पनि र परियोजनामा लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो सोंच देखिन्छ। यसलाई नीति र व्यवहारबाट बदल्नुपर्छ। सहकारीका माध्यमबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो जोड छ।
राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानका विभिन्न कार्यकर्ता टाँठाबाठाले मात्रै पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, अनुदानको सही सदुपयोग र लक्षित वर्गमा पुग्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
वामपन्थी सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ, यहाँले पनि मन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको छ, सरकार र आफ्नै कामको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
अन्त्यमा ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आम सहकारीकर्मीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अन्तर्वार्तापद्मा अर्यालभूमि व्यवस्था मन्त्री
अवैध सम्बन्ध लुकाउन आफ्नै प्रेमिकाको हत्या
प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने सिन्धुलीका बम्जन पक्राउ